Warshadda China Stripe Tarp iyo soosaarayaasha | ShiningPlast
3-Ply Synthetic Roofing Rootiing Underlayment
Tariibka 'PE Stripe Tarp' wuxuu ka samaysan yahay dharka HDPE oo leh dharka midabka kaladuwan sida macaamiisha loo dalbado, labada dhinacba wuxuu ku xardhay qalab LDPE ah, afarta gees ee kuleylka ayaa lagu xardhay xarig PP-ga ah. Grommets-ka Aluminium ee udhexeeya geesaha afarta gees waxaa lagu xoojin karaa baararka caagga ah.
Dhar jilicsan oo la daweeyay ayaa ah mid aad u waari kara isla markaana xarkaha xadhkaha goosadka leh ee xadhkaha leh ayaa hubiya soosaarka heerka dhismaha. UV lagu daaweeyaa sidoo kale waa la heli karaa si tuubbadu u sii waarto. Waxaan soo saari karnaa badeecado la dhammeeyay, laakiin sidoo kale waxaan kuu soo saari karnaa duub dhar-hore loo sameeyay oo adiga adiga ah.
Miisaan 50-400 gsm
1. Alaab kasta oo la dhammeeyay oo kuxiran boorsada 'poly poly' oo ay ku jirto sumad la galiyay.
4. Duubista dharka ayaa dib loogu celin karaa fiilooyinka birta.
Hore: Rolpaulin Rolls
Adeeggeenna macaamiisha 24/7 ee internetka ayaa ka jawaabi doona su'aalahaaga ama weydiimahaaga isla markiiba. Haddii aad farriintaada noogu dhaafto emayl ahaan, waxaan kugu soo la soo noqon doonaa 12 saacadood gudahood. Mahadsanid.